Casinos ọdụ ụgbọ na-agba afọ iri anọ na Vegas na Ngosipụta Firework na Ọdụ Obí, Red Rock, na GVR - pisklak.net
Casinos ọdụ ụgbọ na-agba afọ iri anọ na Vegas na Ngosipụta Firework na Ọdụ Obí, Red Rock, na GVR
Casinos Casinos, ndị na-eduga n’ịgba chaa chaa na ndị na-ahụ maka ntụrụndụ ga-akpọ ndị ọbịa si n’ofe Las Vegas ka ha mee ememme ncheta nke iri anọ na anọ ya na ọtụtụ ihe nkiri ọkụ na-amalite, ebe ọ malitere, na Palace Station na Tọzdee, July 1 na 9 elekere.
Ememe a ga-aga n’ihu na ngwụsị izu na oku na Sunday, July 4, na 9 pm na Red Rock Casino na Green Valley Ranch Resort. Ihe ngosi ahụ, nke Grucci gosipụtara na Fireworks, ga-adị ndụ na ntanetị niile na ntanetị mgbasa ozi gụnyere Twitch.
Na mgbakwunye, dịka akụkụ nke mmekọrịta ya na The Public Education Foundation na Three Square, a ga-akpọ ndị ọrụ afọ ofufo na ndị ọrụ si nnukwu ndị mmekọ obodo abụọ a ka ha lelee ihe ngosi ndị a dịka ekele maka nnukwu ọrụ ha n’afọ gara aga site na ọdọ mmiri ndị njem. .
Caslọ ọrụ Casinos ‘ga-asọpụrụ ụbọchị ncheta dị mkpa site na onyinye ịgba egwu, nri nri, na nchịkọta nkwari akụ emere naanị maka ndị obodo n’oge July.
Ọbịa ga-enwe ọpụrụiche themed desserts awa niile Lucky Penny, Brass ndụdụ, na steakhouse ọnọdụ. Ndị nwere obi ụtọ ịbanye na ndị nwere ike ịnata onyinye ga-enweta onyinye onyinye nke gụnyere ihe ncheta ọdụ Casinos-dị ka ihe ncheta afọ iri anọ na ise na ngwakọta t-shirt, nke iko mmanya abụọ na-enweghị mmiri na akpa oyi, akwa mkpuchi, na aka aka ogologo. uwe elu Ndị ọbịa nwere ike ịnwe mgbagha nke dị nso n’ụlọ mgbe ị na-ede akwụkwọ ngwugwu StaCation nke obodo Nevada, na ihe ọ bụla ọdụ Casinos, nke na-ewepụ ụgwọ ezumike na ọnụego ụlọ oriri na-enweghị atụ. Egwuregwu okpokoro cha cha ga-agbakwunye na tebụl tebụl nke afọ iri anọ na ise na ndị nchịkọta mgbawa ga-achọ itinye aka ha na akara ngosi ncheta dị iche iche na ụka dị iche iche. A na-akpọkwa ndị ọbịa ka ha nwalee nsogbu ha na ụlọ Bingo niile na Tọzdee, Julaị 1 na bọọlụ Ego na-eme na 1 pm, 3 pm, 7 pm, na bingo 9 pm na N45 bọọlụ maka onyinye ego nke $ 1,976. Tụkwasị na nke a, ebe a na-agagharị gburugburu ọnwa ahụ ga-anabata egwuregwu egwuregwu Rock Shot Bingo na-agbakwunye na $ 15,000 Bingo Bashes na-ewere ọnọdụ na Obí ọdụ na July 3 na Green Valley Ranch na July 17.
Echiche Post: 1,669